खुसीको खबर ! अनिता खड्काको अ’प्रेसन सफल भयो, अब अनिता बोल्न सक्छिन् (भिडियो हेर्नुस) – Nep Stok
पुष १७, २०७८ शनिबार 229
करिव दुई वर्ष अघिबाट बिरामी भएर बोल्न तथा हिँडडुल गर्न नसक्ने अनिता खड्काको अहिले सफल अप्रेसन भएको छ । काठमाडौको टिचिङ अस्पतालमा उनको सफल अप्रेसन भएको हो । निकै लामो समयदेखी उनी ओछ्यान परिरहेकी थिइन् । उनको स्वास्थको कामना गर्दै थुप्रैले प्रार्थना गरिरहेका थिए । सफल अप्रेसन भएता पनि अझै केही दिन उनको अवस्था जटिल नै रहने उनको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरुले बताएको अनिताका श्रीमान बिनोदको भनाई छ ।
उनी बिरामी भए देखि नै उनको अवस्थाको बारेमा टिकटकमा धेरैले थाहा पाएका थिए । उनको टिकटक आइडिबाट उनको अवस्था देखेर थुप्रैले उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन । करिव १ महिना अघि टिचिङ अस्पतालबाट अनिताको अप्रेसन हुने जानकारी आएको थियो । अहिले उनलाई चिन्ने र टिकटकमा उनलाई मनपराउने सबै दर्शकले उनको बोली सुन्न आतुर रहेको भन्दै अनिता चाडै निको भएर टिकटकमा उनको बोली सुन्न आतुर भएको भने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अनिताका श्रीमान बिनोदले सम्पुर्ण श्रोताको उक्त भनाई अब केही दिनभित्र मै पूरा हुनसक्ने बताएका छन । अनिताको हेरचाह गर्दै आएकी राधाको बारेमा पनि धेरैले टिप्पणी गरेका थिए । टिकटकमा अनिता सगैँ देखिने राधा अनिताकी आमाजु हुन । उनले अनिता बिरामी भएदेखी नै निरन्तर उनको हेरचाह गर्दै आएकी छिन ।
एउटि बुहारिलाई त्यो अवस्थामा हुदा पनि त्यति धेरै हेरचाह गरेको भन्दै उनको धेरैले प्रशंसा गरेका थिए । अब अनिता आफै बोल्न सक्ने र आफ्नो हेरचाह आफै गर्न सक्ने हुन्छिन भन्ने आफुलाई आश भएको बिनोदले बताए ।
अनिताकी एक छोरी पनि छिन । पौष १५ गते अनिताका श्रीमान बिनोदको जन्मदिन पनि हो । आफ्नो जन्मदिनमा अनिताको सफल अप्रेसन भएकोले आफुलाई यो भन्दा ठूलो उपहार जीवनमा केही नहुने भन्दै आफ्नो जन्मदिनको उपहार आफुले कहिले पनि भुल्न नसक्ने पाएको बताएका छन । अप्रेसन पछि अहिले अनितालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । तर पनि अवस्था भने राम्रो भएको बिनोदले बताए । अब केही दिन अवस्था जटिल नै हुने डाक्टरहरु भनाइ रहेको बिनोदले जानकारी दिएका छन ।
अबको २/३ दिन भित्रमा अनिता बोल्न सक्ने र सबैको सामु उपस्थित हुने आफुलाई आश रहेको बिनोदको भनाई छ । सम्पुर्ण दर्शकहरुको चाहाना अब केही दिनमा पूरा हुने उनको भनाई छ । अनिताको उपचारका लागि सहयोग गरिदिनु हुने सम्पुर्ण सहयोगी दाताहरुलाई पनि उनले धन्यवाद दिएका छन ।
तपाइहरुकै सहयोगले अब अनिता छिटै निको भएर आउने भन्दै बिनोदले आफुलाई पनि धेरै खुशी दिनु भएको बताएका छन । साथै अनिताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सम्पुर्ण दर्शकलाई पनि उनले धन्यवाद दिएका छन । अब छिटै अनिताको बोली सुन्न पाउने उनले बताए । (भिडियो हेर्नुस)
Prevस्टेजमै कु’टिए चर्चित गायक राजेश पायल राई (भिडियो सहित)
Nextझापाकी नेत्रमायाले जन्माइन तिम्ल्याहा सन्तान !
मृतक महिला र बेवारिसे दुई बच्चा फेला, उनीहरु को हुन् ?
कोभिडको खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्यु, खोपकै कारण मृत्यु भएको पुष्टी
आफ्नै भाई मान्थे मैले दुर्गेशलाई, तर उसैले मलाई फसाउन खोज्यो भन्दै भक्कानिए पल शाह